IZenzo 26 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
26 UAgripa+ wathi kuPawulos: “Uvunyelwe ukuba uzithethelele.” Wandula ke uPawulos wolula isandla sakhe+ waza wazithethelela esithi:+ 2 “Ngokuphathelele zonke izinto endimangalelwa+ ngazo ngamaYuda, Kumkani Agripa, ndizibalela ekuthini ndinoyolo ekubeni ndiza kuzithethelela phambi kwakho ngalo mhla, 3 ngokukodwa njengoko uyingcali kuwo onke amasiko+ kwakunye neembambano eziphakathi kwamaYuda. Ngoko ke ndiyakubongoza ukuba undive ngomonde. 4 “Eneneni, mayela nohlobo lobomi+ endandibuphila ukususela ebutsheni phakathi kohlanga lwakowethu naseYerusalem ukususela ekuqaleni, onke amaYuda 5 awayeqhelene nam ngaphambili kwasekuqaleni ayazi, ukuba phofu ayakunqwenela ukunikela ubungqina, ukuba ndandikwelona hlelo+ lingqongqo lonqulo lwabaFarisi.+ 6 Ukanti ngoku ngenxa yethemba+ lesithembiso+ esenziwa nguThixo kookhokho bethu ndibizelwe ekugwetyweni; 7 kanti izizwe ezilishumi elinambini zakowethu zithembe ukufikelela kwinzaliseko yesi sithembiso ngokunikela kakhulu kuye inkonzo engcwele ubusuku nemini.+ Ndimangalelwa ngokuphathelele eli themba ngamaYuda,+ kumkani. 8 “Kutheni ningakholelwa nje ukuba uThixo uyabavusa abafileyo?+ 9 Mna, ngokwenene ndandicinga ukuba kufanelekile ukwenza izinto ezininzi ezichasene negama likaYesu umNazarete; 10 ezo, enyanisweni, ndazenzayo eYerusalem, yaye abaninzi kwabo bangcwele ndabatshixela ezintolongweni,+ njengoko ndandifumene igunya kubabingeleli abaziintloko;+ yaye xa beza kubulawa, ndandivota ngokunxamnye nabo. 11 Ndandibohlwaya izihlandlo ezininzi kuzo zonke izindlu zesikhungu+ ndizama ukubanyanzela ukuba balukhanyele ukholo; yaye ekubeni ndandinengcwangu ngakubo, ndandide ndiye kubatshutshisa kwanakwizixeko ezingaphandle. 12 “Kwathi kusenjalo, njengoko ndandihamba ndisiya eDamasko+ ndinegunya nomiselo oluvela kubabingeleli abaziintloko, 13 ndabona emini emaqanda endleleni, kumkani, ukukhanya okungaphaya kokuqaqamba kwelanga kuvela ezulwini kubengezela ngeenxa zonke kum nakwabo babehamba nam.+ 14 Sithe sakuwa sonke emhlabeni ndeva ilizwi lisithi kum ngolwimi lwesiHebhere, ‘Sawule, Sawule, unditshutshiselani na? Wenzakala ukhaba iimviko nje.’+ 15 Ndathi ke mna, ‘Ungubani na, Nkosi?’ Yathi iNkosi, ‘NdinguYesu, lo umtshutshisayo.+ 16 Noko ke, phakama ume ngeenyawo.+ Ndibonakele kuwe ngenxa yoku, ukuze ndikunyule njengomlindi nengqina+ lezinto ozibonileyo nezinto endiya kukubonisa zona ngam; 17 ngoxa ndikuhlangula kwesi sizwana nakwiintlanga, endikuthuma kuzo,+ 18 ukuvula amehlo abo,+ ukubaphethula ebumnyameni,+ baye ekukhanyeni+ nakwigunya likaSathana,+ baye kuThixo, ukuze bamkele uxolelo lwezono+ nelifa+ phakathi kwabo bangcwaliswa+ ngokholo lwabo kum.’ 19 “Ngoko ke, Kumkani Agripa, andibanga ngongawuthobeliyo umbono wasezulwini,+ 20 kodwa kokubini kwabo baseDamasko+ kuqala nakwabo baseYerusalem,+ nakulo lonke ilizwe lakwaYuda, nakuzo iintlanga+ ndasa isigidimi sokuba bafanele baguquke baze baphethukele kuThixo ngokwenza imisebenzi efanele inguquko.+ 21 Ngenxa yezi zinto amaYuda andibamba etempileni aza alinga ukundibulala.+ 22 Noko ke, ngenxa yokuba ndizuze uncedo+ oluvela kuThixo ndiyaqhubeka ukusa kule mini ndinikela ubungqina kwabancinane nabakhulu, kodwa ndingathethi nto ngaphandle kwezinto abazixelayo abaProfeti+ kwakunye noMoses+ ukuba zaziza kwenzeka, 23 zokuba uKRISTU wayeza kubandezeleka+ yaye, njengowokuqala ukuvuswa+ kwabafileyo, wayeza kuvakalisa ukukhanya+ kwesi sizwana nakwiintlanga.”+ 24 Ke kaloku njengoko wayezitsho ezi zinto ezithethelela, uFesto wathi ngelizwi elikhulu: “Uyaphambana,+ Pawulos! Ukufunda kakhulu kuyakuphambanisa!” 25 Kodwa uPawulos wathi: “Andiphambani, Festo Obalaseleyo, kodwa ndithetha amazwi enyaniso nawengqondo ephilileyo. 26 Ngenene, ukumkani endithetha kuye ngenkululeko yokuthetha wazi kakuhle ngezi zinto; kuba ndeyisekile ukuba akukho nanye kwezi zinto engaphawulekiyo kuye, kuba le nto ibingenzelwanga emfihlekweni.+ 27 Uyakholelwa na, Kumkani Agripa, kubaProfeti? Ndiyazi ukuba uyakholelwa.”+ 28 Kodwa uAgripa wathi kuPawulos: “Ngexesha elifutshane ubuya kundeyisela ekubeni ndibe ngumKristu.” 29 Ngako oko uPawulos wathi: “Ngumnqweno wam kuThixo ukuba enoba kungexesha elifutshane okanye ngexesha elide, ingabi nguwe kuphela kodwa kwanabo bonke abo bandivayo namhlanje, babe njengoko ndinjalo nam, ngaphandle nje kwale mixokelelwane.” 30 Yaye ukumkani wasukuma yaza yenjenjalo nerhuluneli noBhernike nabantu ababehleli kunye nabo. 31 Kodwa njengoko babesimka baqalisa ukuthetha omnye komnye, besithi: “Lo mntu akenzanga nto ifanele ukufa+ okanye imixokelelwane.” 32 Ngaphezu koko, uAgripa wathi kuFesto: “Lo mntu ngekhululiwe ukuba ebengabhenelanga+ kuKesare.”